Ụbọchị My Pet » Olee otú iji dajụọ ndị a Gbasara
emelitere ikpeazụ: Apr. 01 2020 | 2 min agụ
Dị ka okwu na-aga, -agbasa bụ ike na-eme. Ọ bụrụ na i kpebiri ga-agbasa na-eburu ya ihe ọ bụla banyere mmetụta na mmetụta uche, ọ dị mkpa ka inwale obibia agbasa ya anya ka ezere ịkpasu onye nke ọzọ. Proper okpukpu-elu oru na-adabere n'ụzọ dị ukwuu na ogologo oge ị na onye gị na ndidi ke mmekọrịta, otú akwa mmekọrịta bụ, na ma ma ọ bụ abụọ ahụ nwechara mmetụta.
Mgbe agwụcha ọ bụla mmekọrịta agbalị ime ya na klas na ọmịiko. Ebe a na-a ole na ole Atụmatụ ị kwesịrị ị na-eso mgbe bụ oge ịkwụsị, ma cheta onye ọ bụla mmekọrịta na mmeghachi omume dị iche, -atụ anya na-atụghị anya dị ka a nzaghachi.
-Eme Ihe n'Eziokwu
Unu anwala-eme ka elu ngọpụ maka na ịhapụ ọ bụrụ na ha na-adịghị n'ebe. Nanị gwa onye gị na ya mere mmekọrịta adịghị arụ ọrụ n'ihi na ị. N'inye ya nri ma ọ bụ ya na ìit bụghị gị, ọ bụ Mei akara nwere ike ime ka ị na-eche dị na ị na-ekwe ka gị na onye òtù ọlụlụ ala mfe, ma ọ ga-abụ na ọtụtụ na-ahụ site na nke a na pụrụ ọbụna ime ka elu ihe mere ha na-apụghị ịhụ n'anya na-eme ka ha kpasuru iwe na obi mgbawa.
Adịghị Eriri ha aga
Ọ bụrụ na i kpebiri iji tipịasịa na onye, ọ dịghị ihe mere ka ịdọrọ gị mmekọrịta. Site n'izere ndakpọ, ị na onye òtù ọlụlụ nwere ike na-eto eto ọzọ na ndị ọzọ mmasị, ihe ị na-achọghị. Mgbe ị chọrọ ịkwụsị a mmekọrịta, ka onye nke ọzọ mara ozugbo bụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị na o kwere omume nke mere na mmetụta ha adịghị anọgide na-mikwuo na ịzụlite.
Igbu N'ihi na Good
Ihe ikpeazụ a onye ịbụ onye a gbahapụrụ chọrọ ịnụ ekpere bụ II chọrọ n'ezie ịnọgide ná mmekọrịta anyị dị ka nnọọ friendsî mgbe ha ka nọ ịhụnanya. Ọ kasị mma ka ndị niile na-enye onye ị na-na-agbasa oge ụfọdụ iji nweta ihe ị na tupu-agbalị iru a enyi ha. Ọzọkwa, unu anwala ịgbanwe mmekọrịta mmekọahụ na-a ìfriends na benefitsî mmekọrịta ma ọ bụrụ na ị maara onye nke ọzọ ka na-ebu mmetụta gị. Nke a nwere ike inye onye nke ọzọ olileanya ụgha na ị chọrọ ịtụte romance mgbe, n'ezie, ị na-adịghị. Nke a pụrụ iduga mgbagwoju anya na mwute n'ikpeazụ.
Ịgbasa Na Private
Ị na-eche na naanị n'ihi na ị bụ n'ebe ọha mgbe ị tipịasịa na onye ị ga ọma kwụsị onye ahụ si eme ka a idaha. Mgbe ụfọdụ, mmetụta ndị siri ike na-apụghị gbochikwara n'agbanyeghị otú ọtụtụ ndị ọzọ nọ gburugburu. Site na-agbasa onye n'ebe ọha na ị na-etinye na onye na a nwere na-emenye ihere ọnọdụ on top of nchekasị nke ịbụ onye a gbahapụrụ. Nke a na-egosi a enweghị nkwanye ùgwù dị na ya gị. -Agbasa bụ ihe na a ga-eme na nzuzo ka ọ bụla mmetụta uche nwere ike igosipụta na-enweghị ihere.
Agbaso Ụkpụrụ Ọma
N'agbanyeghị otú i kpebie iji tipịasịa na onye, ọ kasị mma mgbe niile na-akpa àgwà ọma n'uche n eme ndị ọzọ dị ka ị ga-ha ka ha ra unu. Ọ bụrụ na ị na-ịbụ onye a gbahapụrụ, ị ga-achọ onye nke ọzọ na-egosi ime ihe n'eziokwu na-akwanyere kwupụta gị. Nke a n'uche mgbe na-eme atụmatụ gị ezumike elu atụmatụ. Unu eledala onye gị na ihe ọ bụla na-erughị nke a n'ụzọ karịa otú ị ga-atụ anya ka e mesoo ma ọ bụrụ na ọnọdụ ahụ e nwesịrị.